Boeing na-ese onyinyo ụgbọelu n'oge ụgbọ elu ule | Akụkọ akụrụngwa
Inweta ụgbọ elu nnwale ogologo oge ekwesịghị ịbụ ihe kachasị atọ ụtọ n'ụwa. Agbanyeghị, nke ahụ bụ ihe okike dị maka. Nke a bụ ihe Boeing gbalịrị ime na otu n'ime ụgbọ elu ule ya, a Boeing 787-8 na Rolls-Royce Trent 1000 engine.
Nnwale ule ahụ bụ ime njem nke were awa iri na asaa. Ya mere, ndị otu ule ahụ rutere ọrụ wee wepụta otu ụzọ gasị kachasị achọ oge niile: ha chọrọ ịpị silhouette nke ụgbọ elu ha na-anwale gafee mbara igwe nke United States, ihe atụ a makwaara ' Dreamliner '.
Ngwa ahụ FlightRadar na-ahụ maka inye ịdọ aka na ntị mbụ. Ngwa a dekọtara ụzọ niile nke ụgbọ elu ndị na-arụ ọrụ n’oge ahụ na akara akara akụkọ niile nke otu. Otu ihe ahụ mere na August 2 na ụgbọ elu ule BOE004.
Zọ ahụ malitere na Seattle na oge awa 17 nke ụgbọ elu ọ gafere steeti 22. N'otu aka ahụ, Boeing hapụkwara ọkwa mgbasa ozi ya nke ọ kọwara ntakịrị ebe isi ihe nke njem a. Ya mere, anyị nwere ike ịgwa gị na imi nke ụgbọ elu na-atụ aka n'isi ụlọ ọrụ Boeing n'onwe ya na Puget Strait. Mgbe nku si na mgbago ugwu Michigan rue oke ala Canada. N'ikpeazụ, ndị kwụ n'ahịrị dị na steeti Alabama.
Ugbu a, FlightRadar kwukwara na ọ bụghị oge mbụ onye Boeing rụrụ na-emepụta ihe na mbara igwe. Ma o ji ụgbọ elu gosi nke a ha sere aha 'Max' ma ọ bụ sị 'Ndewo' —'Hello 'na Bekee'— nye ndị nkiri niile maara ụzọ dị iche iche.
Iji mechaa, anyị ga-agwa gị na ụdị ụgbọ elu a, Boeing 787-8 nwere ike iru ọsọ ọsọ nke 950 km /h Mbido ya laghachiri na 1996 ma ọ nwere ike ịnabata karịa ndị njem 300.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » Noticias » Boeing na-ese onyinyo ụgbọelu n'oge ụgbọ elu ule